Siyaasadda Khaaska ah
Dib-u-Celinta Fudud waxay qarsoodi ka dhigeysaa mid dhab ah. Nidaamkan gaarka ah ee qarsoodiga ah wuxuu sharxayaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aanu soo aruurinno iyo sida aan u isticmaalno Arag tani Siyaasadda asturnaanta asturnaanta si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan siyaasadaha asturnaanta guud.
Uruurinta Macluumaadka joogtada ah
Dhamaan server-yada waxay raacaan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan booqdayaashooda. Macluumaadkan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidneyn, cinwaanada IP, faahfaahinta shabakadda, waqtiga jadwalka iyo bogagga tixraaca. Macluumaadkaan midkoodna shakhsi ahaan ma aqoonsan karo martida gaarka ah ee boggan. Macluumaadka waxaa loola jeedaa maamulka caadiga ah iyo dayactirka.
Meeshii lagama maarmaanka ah, Lacag Dib-u-Celinta waxay isticmaalaan cookies si ay u keydiyaan macluumaadka ku saabsan doorbidaha soo-booqdaha iyo taariikhda si ay si wanaagsan ugu adeegaan booqdaha iyo / ama soo-booqdaha leh maadooyin loo habeeyey.
La-hawlgalayaasha xayaysiinta iyo kuwa kale ee saddexaad waxay sidoo kale isticmaali karaan cookies, scriptaries iyo / ama shabakadaha webka si ay ula socdaan booqdayaasha boggayaga si ay u muujiyaan xayaysiinta iyo macluumaad kale oo faa'iido leh. Tixgelinta noocan oo kale ah waxaa si toos ah u fuliya dhinacyada saddexaad iyada oo loo marayo koodhkooda gaarka ah waxayna ku xiran yihiin siyaasadahooda gaarka ah.
Xakamaynta Khaaska ah
Ogsoonow in aad bedeli karto goobahaaga browser si aad u joojiso cookies haddii aad leedahay welwel qarsoodi ah. Kumbiyuutarrada oo idil laga dhigo dhammaan goobaha laguma talinayo maadaama ay faragelin karto isticmaalkaaga goobaha qaarkood. Xulashada ugu wanaagsani waxay tahay in la joojiyo ama u oggolaato kukiyadaha ku saleysan goobta. La tasho dukumiintigaaga baraha si aad u hesho tilmaamo ku saabsan sida loo xiro kukiyada iyo hababka kale ee raadraaca. Liiskan maareynta asturnaanta shabakadda ee webka Xidhiidhada ayaa sidoo kale laga yaabaa inay faa'iido leeyihiin
Qoraal Gaar ah oo ku saabsan Google Advertising
Xayeysi kasta oo ay adeegto Google, Inc., iyo shirkadaha la socda ayaa laga yaabaa in lagu kantaroolo isticmaalka cookies. Kukiyadaas waxay u oggolaanayaan Google inay muujiyaan xayeysiisyada iyadoo ku saleysan booqashooyinkaaga boggan iyo goobo kale oo adeegsanaya adeegyada xayeysiinta Google. Baro sida loo sameeyo joojiso isticmaalka cookie ee Google. Sida kor ku xusan, raadin kasta oo ay Google ku samayso iyada oo loo marayo cookies iyo habab kale ayaa ku xiran sharciyada gaarka ah ee Google.
Cabashooyinka ama su'aalaha ku saabsan siyaasaddan gaarka ah waxaa lagu hagaajin karaa fitnessrebates@yahoo.com si loo sii cadeeyo.
Websaydkani waxaa laga yaabaa in lagu siiyo magdhow laga soo iibsado kaararka. Milkiilaha boggan, www.fitnessrebates.com, waa kaqeybgalaha Amazon Associates, Linkshare, iyo CJ.com Barnaamijyada Affiliate, kuwaas oo loogu talagalay inay bixiyaan habab loogu talagalay goobaha lagu kasbado kharashka xayeysiinta adoo isku xiraya alaabada ama adeegyada.
Bixinta Xidhiidhka Qalabka:
Qaar ka mid ah isku xirnaanta xarumaheena ayaa ah "links links". Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad gujiso xiriirka iyo iibsashada sheyga / adeegga, boggan waxaa laga yaabaa inuu helo guddi isku xiran. Xidhiidhyadani waxay isticmaali karaan barnaamijka saddexaad ee daawashada. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad gujiso xiriirka oo aad booqo boggaga soo if-baxaya, cookie ayaa lagu dejin doonaa shabakadaada webkaaga taas oo keeneysa in boggaani uu helo guddi "haddii" aad iibsato sheyga dhinaca kale.
Si kasta oo ay tahay, FitnessRebates.com waxay ku talineysaa kaliya alaab ama adeegyo aan rumeyneyno inay qiime u leeyihiin akhristeyaasheena. Waxaan kufineynaa tan iyadoo la raacayo 16 CFR, Qeybta 255: "Guudaha ku saabsan Isticmaalka Baaqa iyo Shahaadooyinka."
Ogeysiiska Sheegista Shirkadda Amazon:
Lacag Dib Loogu Furo waa qayb ka mid ah Barnaamijka Amazon Services LLC Associates Program, barnaamijka xayaysiisyada shirkadda ee loogu talagalay inay bixiso habab loogu talagalay mulkiilayaasha bogagga si ay u kasbadaan kharashka xayeysiiska ee xayeesiinta iyo isku xirka amazon.com iyo bog kasta oo kale oo laga yaabo inay la xiriiraan Amazon Service LLC Associates Barnaamijka
CJ, ShareASale, Ogeysiiska Sheegidda Shirkadda Clickbank Affiliate:
Khidmadaha Fitness waxay kaqeyb qaataan CJ (Guddiga Iskuxirka), ShareASale, iyo barnaamijyada kudhisan Clickbank, waana lagaa bixin karaa hadaad iibsato badeecad / adeeg ama aad isqorto dalab kadib markaad gujiso xiriir xiriiriye ah shabakada Fitness Rebates. Xusuusin: Barnaamijyada isku xidhka Komishanka & ShareASale waxay dhiirrigeliyaan tiro badan oo badeecooyin iyo adeegyo kala duwan ah oo ka socda shirkado badan oo kala duwan.
DoubleClick gamuun cookie:
Google, oo ah iibiyaha dhinac saddexaad, wuxuu adeegsadaa cookies si uu ugu adeego xayeysiiska www.fitnessrebates.com. Adeegsiga Google ee cookie-ka 'DART' wuxuu awood u siinayaa inay ugu adeegto xayeysiinta isticmaaleyaasha iyadoo lagu saleynayo booqashadooda www.fitnessrebates.com iyo bogagga kale ee internetka. Isticmaalayaashu way ka bixi karaan adeegsiga cookie-ka 'DART' iyaga oo booqanaya xayeysiiska Google iyo qaanuunka arrimaha asturnaanta shabakadda cinwaanka URL-ka soo socda - http://www.google.com/privacy_ads.html
Haddii aad doorato inaad nala soo xiriirto email ahaan, waxaa laga yaabaa in aan ku hayno fariimaha emailadaada
cinwaanka emailkaaga iyo jawaabteena. Waxaan bixinnaa ilaalin isku mid ah oo ku saabsan isgaarsiinta elektaroonikada ah ee aan u shaqeyneyno bixinta macluumaadka lagu helo internetka, boostada iyo telefoonka. Tani waxay sidoo kale khusaysaa markaad iska diiwaangaliso boggayaga internetka, iska diiwaan gali nooc kasta oo ka mid ah foomamkeena adigoo isticmaalaya cinwaanka emailkaaga ama ka iibso boggan. Wixii macluumaad dheeraad ah eeg siyaasadaha emailka hoose.
Sideen u Isticmaalnaa Macluumaadka Aad Bixiso?
Si baaxad leh loola hadlo, waxaan u adeegsanaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ujeedooyinka ah ee maamula dhaqdhaqaaqa ganacsiga, bixinta
adeegga macaamiisha iyo sameynta alaabta iyo adeegyada kale ee macaamiisheena iyo macaamiisha mustaqbalka.
Ma heli doonno macluumaadka shakhsiga-aqoonsi ee adiga kugu saabsan markaad soo booqato
goobta, haddii aad dooratid inaad bixiso macluumaad noocan ah noo, iyo macluumaadka noocaas ah lama iibin ama haddii kale
loo wareejiyo dhinacyada saddexaad ee aan la maamulin iyadoon loo oggolaanin isticmaalaha wakhtiga ururinta.
Waxaa laga yaabaa inaan siidayno macluumaadka marka sharci ahaan lagu qasbayo inay sidaas yeelaan, marka loo eego, markaan, rumaysad fiican, waxay aamminsan yihiin in sharcigu u baahan yahay ama ilaalinta xuquuqdeena sharci.
Waxaa naga go'an inaan ku hayno cinwaankaaga emailka qarsoodi ah. Ma iibineyno, kireyneyno, ama kireyno liisaska liiska
illaa saddexaad, oo ma siin doonno macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee qof kasta oo saddexaad, dawladda
wakaaladda, ama shirkadda waqti kasta haddii aan si khasab ah loogu qasbin in ay sidaas sameeyaan sharcigu.
Waxaan u isticmaali doonaa cinwaankaaga e-mail keliya si aad u bixiso macluumaad waqtigiisa ku saabsan boggan iyo alaabo kale / adeegyo kale oo laga yaabo inaad xiiseyneyso.
Waanu sii wadi doonaa macluumaadka aad soo dirto e-mail adigoo raacaya sharciga federaalka ee khuseeya.
Marka loo hoggaansamo Xeerka Ciqaabta, dhammaan e-mailka laga soo diro ururkayagu wuxuu si cad u sheegi doonaa cidda e-mail ka timid
oo ku siiyaan macluumaad cad oo ku saabsan sida loola xiriiro diraha. Intaa waxaa dheer, dhammaan fariimaha email-ka ayaa sidoo kale ku jira
macluumaad kooban oo ku saabsan sida naftaada looga saaro liistada liiska si aanad u helin e-mail kale
Xulashada / Ka-reebitaanka
Boggayaga ayaa siinaya dadka isticmaala fursadda ay ku diidaan helitaanka isgaadhsiinta annaga iyo lamaanaheena markaan akhrino
tilmaamaha shuruudaha ah ee ku yaala xagga hoose ee e-mail kasta oo ay naga heleen wakhti kasta.
Isticmaalayaasha aan rabin in ay helaan wargeyskayaga ama alaabta wax lagu baddelayo ayaa laga yaabaa in ay joojiyaan helitaanka kuwan
isgaadhsiinta adoo gujinaya cinwaanka email-ka.